Ndị na-emepụta ngwaahịa - China na-eweta ngwaahịa, ụlọ ọrụ
Ihe eji eme ka igwe anaghị agba nchara anaghị adị ọcha
Mpempe igwe anaghị agba nchara izipu igwe anaghị agba nchara, eriri ọkụ flex conveyor belt dị n'ọtụtụ ihe dị iche iche, ọkọlọtọ bụ igwe anaghị agba nchara 304. Ihe ndị ọzọ dịnụ gụnyere: igwe anaghị agba nchara 316, iron carbon dị iche iche, yana ihe arụmọrụ ọkụ dị elu.
Ejiri akwa nchara
Mpempe usoro nke metal bụ kọntaktị site na ọtụtụ usoro (ya na ngalaba 4) na mgbanaka, ọ dị ka ududo, 'ụkwụ' nke usoro nke ọ bụla na-arụ ọrụ na mgbanaka ma na-agbachi azụ onwe ya iji hụ na ha jikọtara ibe ha.
Igwe nchara igwe anaghị agba nchara
Igwe nchara igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ eriri igwe.Ọ nwere usoro dị iche iche nke igwe na-agbanwe agbanwe na-agabiga na eriri igwe kwụ ọtọ. Ihe eji eji igwe anaghị agba nchara na nnukwu ike corrosion steel chromium.
Ọdọ igwe anaghị agba agba
Kinddị a nke ihe eji eji ọla edo mee dịka eriri yinye, a na-a joụ ya site n'ọtụtụ wires, ogologo waya ahụ bụ ịdị elu nke ákwà mgbochi ahụ, anyị nwere ike ịme ya ka ọ bụrụ obosara ị chọrọ.
Aluminom gbasaa ntaneti nke igwe
A na-eji aluminium agbasawanye Aluminom sitere na aluminium a na-ejikọ ọnụ ma ọ bụ gbarie ma na-agbatị, na-etolite oghere nke ụdị diamond / rhombic (ọkọlọtọ). N'ịgbasawanye, efere ọla alumini ga-adị n ’ogologo oge n’okpuru ọnọdụ ndị nkịtị. Ọdịdị diamond na trusses na-eme ka ụdị ọla a dị ike ma sie ike. Enwere ike ịdọrọ ogwe osisi Aluminom gbasaa na usoro mmeghe dị iche iche (dịka ọkọlọtọ, ụdị dị arọ na nke na-emebi emebi). A na-emepụta akwa dị iche iche, oghere oghere, ihe na nha mpempe akwụkwọ. Alala azụ ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị.
Igwe anaghị agba nchara ogologo ngwa ngwa njikọ
Njikọ ngwa ngwa igwe anaghị agba nchara bụ ngwa gburugburu nke igwe nwere oghere n’otu akụkụ ma emee site na 304 ma ọ bụ 316 ọkwa steel.Ọ bụrụ na njikọ ahụ dị, ị na-agbanye aka aka gị n’elu oghere iji mee ka ọ mechie .The nnukwu ihe bụ na ọ gaghị agba nchara oge, ọbụlagodi na ikuku mmiri. Agbanyeghị na ha na - abata nha n’agbata 3.5mm na 14mm, ọ bụrụ na ị nwere otu etu ị si chọọ, biko jụọ anyị ka anyị nwere ike ịnye ya.
Aluminom yinye nko
Dika udiri ejiji, ihe ndi ozo di iche na nke puru iche na-adọta anya ndi mmadu.
Ejiri mkpuchi 13mm a na-eji eriri njikọ ahụ rụọ nke dị mfe iji jikọta ma wepụ. Nke a bụ ụfọdụ nkọwa nke mkpuchi ihe eji achọ mma maka akwụkwọ.
Balustrde na nchedo nke igwe anaghị agba nchara nchara waya
Ngwongwo eriri igwe anaghị agba nchara maka ezigbo balustrade infill, dịka stair balustrade, balcony balustrade na pass balustrade. Oghere ndị ọzọ, mmetụta ndị ọzọ, nchekwa karịa more eriri igwe anaghị agba nchara maka nrụpụta steepụ maka ụlọ obibi na-enye nchebe yana ịbụ ihe eji emepụta ya. Igwe na-agbanwe agbanwe nke igwe anaghị agba nchara nke rhombus na ntanetị nwere arụmọrụ na-agbanwe agbanwe nke ukwuu, ọ na-enweghị mgbagha, ike na-eguzogide ma na-agbagha, ọtụtụ mmiri na-eguzogide mmiri, snow na ajọ ifufe.
Mgbada igwe anaghị acha nchara
Igwe anaghị agba nchara igwe nchara, nnụnụ, nchara, palts, A na-ejikarị ya bụ eriri Knotted, igwe anaghị arụ ọrụ dị mma, bụ ụdị eriri eji akpụ aka na-aka, aka ọ bụla na-agafe eriri dị n'okpuru ma dị n'okpuru eriri waya ọ bụla. Rodọ waya ma ọ bụ weft kpamkpam nwere otu dayameta.
A na-eji igwe anaghị agba nchara nchara ma ọ bụ nhịahụ eriri igwe, eriri igwe eriri igwe na-agbanwe agbanwe, ọdụm na ọdụ gburugburu, na-eme ka akụ na ụba dịrị na gburugburu ya, yana mmeghe edo edo na nghọta dị mma, eriri fulawa nwere ike inye ezigbo mma. ọnọdụ mmekọrịta maka ndị ọbịa. Anyị bụ igwe anaghị agba nchara ígwè dị na China ebe a, na-echepụta ma na-arụpụta nha dị iche iche nke ebe nchekwa ọdụm dị otu a.
Enwe gosipụtara ntupu, ntupu
Mkpuchi ụdọ ụdọ ụdọ
Emebe Mpepu Mpepu Mpepe, anị na-egbochi ihe nchekwa iji gbochie ihe egwu ma mee ka ebe ọrụ dị mma. Ihe ọghọm ịda ma ọ bụ dopuru na-eme mgbe ihe si n'ihe dị elu daa ma mebie akụrụngwa, mmerụ ahụ ma ọ bụ nwụọ. Nke a abụghị sọsọ nchekwa nchekwa nke ndị ọrụ kamakwa akụrụngwa dị oke egwu na mpaghara nsogbu.